I-Andrew Jackson Quotes - iMbali yaseMerika
Ukuqinisekiswa kunye neengcaphuno ezingaqinisekisiwe ukusuka kumongameli we-7 we-US
Njengabaninzi bamongameli, u- Andrew Jackson wayenabhali beencwadi, kwaye ngenxa yoko, ezininzi iintetho zakhe zazihle, zifutshane, kwaye zincinci kakhulu, nangona ezinye iingxabano zongameli wakhe.
Ukhetho lukaAndrew Jackson kwi-ofisi kaMongameli wase-United States ngowe-1828 lubonwe njengokwanda komntu oqhelekileyo. Ngokwemigaqo yonyulo yosuku, walahlekelwa unyulo luka-1824 kuYohn Quincy Adams , nangona kunjalo uJackson wayenqobile ivoti ethandwayo, waza wadibana no-Adams kwikholeji yokhetho , kodwa walahleka kwiNdlu yabameli.
Emva kokuba uJackson eba ngumongameli, wayengowokuqala ukusebenzisa amandla okongameli. Wayeyaziwa ngokulandela iimbono zakhe ezinamandla kunye nokuvota ngaphezulu kweebhilikhwe kunabo bonke abaongameli phambi kwakhe. Iintshaba zakhe zambiza ngokuthi "uKumkani uAreya."
Iingcaphuno ezininzi kwi-intanethi zibhekiswe kuJackson, kodwa kunqongophala ukunikezela imeko okanye intsingiselo kwisicaphuno. Uluhlu olulandelayo luquka izicaphuno kunye nemithombo apho kunokwenzeka khona - kunye nesandla esingaphandle.
Iingcaphuno eziqinisekileyo: Intetho kaMongameli
Iingcaphuno ezichanekileyo yizo ezifumaneka kwiintetho ezithile okanye iimpapasho zikaMongameli uJackson.
"Uhulumeni okhululekileyo, imfuneko yokuziphatha imele ifanele ibe ngaphezu kweetalenta." (ukususela kwiprogram ebhaliweyo yeNgcaciso yakhe yokuvula)
"Kuya kuba ngumnqweno wokunyaniseka nokunyamekela ukujonga kwimimandla yaseNdiya kwimida yethu imigaqo enobulungisa kunye nenkululeko, kunye nokunika ingqwalasela kunye nokukhathalela ngamalungelo abo kunye nokufunwa kwabo okuhambelana nemikhwa kaRhulumente kunye neemvakalelo bethu bantu. " (ephuma kwidilesi yokuqala ye-Jackson, ngoMatshi 4, 1829)
"Ngaphandle kwemanyano, ukuzimela kwethu kunye nenkululeko ayisoze yaphunyezwa; ngaphandle kwemanyano, ayisoze yagcinwa." (I-dilesi yesibini yokuvula, ngoMatshi 4, 1833)
"Akukho zimbi ezifunekayo kurhulumente. Ububi balo bukho kuphela ekusebenzisaneni kwawo kakubi." (umyalezo kwi-Senate yase-United States ngokuphathelele i-veto yeBhanki ecetywayo yase-United States, ngoJulayi 10, 1832)
Iingcaphuno eziqinisekileyo: Izibhengezo
"Umntu onqaba ukukhusela amalungelo akhe xa abizwa nguRhulumente wakhe ufanelekile ukuba abe khoboka, kwaye kufuneka ajeziswe njengelitshaba lizwe lakhe kunye nomhlobo kwiintshaba zakhe." (Isibhengezo ngaphambi kokuba ngumongameli, ukuvakalisa umthetho we-karate eNew Orleans ngexesha leMfazwe ka-1812, ngoDisemba 2, 1814)
"Umzuzu esiwenzayo kwiintlangano, okanye iintlangano kunye naluphi na isizwe esinokusukela ngalolo xesha kuhla kwe-republic yethu." (Isexwayiso kuYohn C. Calhoun owaye wazisa iNkcazo ukuba uya kuya kwiinkomfa ePanama ukuphucula ubudlelwane kunye nokuxoxa ngeendlela zokungenelela kuMntla eMelika, ngo-1828)
"Ubulumko bendoda abukaze buqulunqe inkqubo yokurhafisa eya kusebenza ngokulinganayo." (Isibhengezo kubantu baseSouth Carolina, ebhalwe nguEdward Livingston kwaye sakhutshwa nguJackson ngoDisemba 10, 1832, ekuphakameni kweCrisis Crisis)
Ezi zicaphuno zinobungqina bokuba bangasetyenziswa nguJackson, kodwa abanakuqinisekiswa.
"Nabani na umntu onelungelo lothunyulo uya kubambelela kwizinto azikholelwayo ngokufanelekileyo, kodwa kuthatha umntu ongcono ukuba avume ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokumelana nokuba uyaphutha." (kwakhona kubangelwa yiGeneral Peyton C. Matshi)
"Indoda enesibindi yenza ininzi." (Le ngumdala omdala owawubhalwa ngu- John Knox ongumguqukisi waseScotland wenkulungwane yeshumi le-16, onokuthi mhlawumbi uphinde ucashunwe nguJackson)
Le quotation ibonakala kwi-Intanethi njengoko kuchazwa nguJackson kodwa ngaphandle kwesi catshulwa, kwaye ayivakala njengezwi likaJackson lepolitiki. Kwakunokuba yinto athetha kwileta yabucala.
"Ndiyathetha inyaniso ukuba yam imeko yenceba ehloniphekileyo."
> Dirck BR. 2007. ISebe eliLawulayo likaRhulumente kaRhulumente: Abantu, iNkqubo, kunye nezoPolitiki . I-Sacramento: ABC-CLIO.
> Farwell B. 2001. I-Encyclopedia yeMfazwe yeLizwe le-19 leminyaka: iMboniselo yehlabathi. ENew York: WW Norton kunye neNkampani.
> I-Keyes R. 2006. I-Quote Verifier: Ngubani othethi, phi, kwaye nini . ENew York: St. Martin Griffin.
> Northrup CC kunye nePrange Turney EC. 2003. I- Encyclopedia yeTariffs kunye noRhwebo kwi-History of US. Umqulu II Ukunciphisa imiba: amaxwebhu aphambili akhethiweyo. Westport, Connecticut: iGreenwood Publishing Group.
Ukubulawa koMongameli kunye nokuzama ukubulala
UMongameli uHarry Truman Iinkcukacha ezimfutshane
Isatifiketi seMongameli kunye no-Vice-Presidents
Ronald Reagan Iinkcukacha ezifutshane
Imbali emfutshane yeeNdlu zeeNtshonalanga zeNdlu
Andrew Jackson: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Iindawo ezigqibeleleyo zokufumana i-Golden Trout e-US
I-Cobra Golf: Inkcazo yeComputer Inkampani
Ngaba Kukhuselekile Ukusela Umlambo?
Ukufuduka-Ukunyanzeliswa, Ukuxhatshazwa, nokuzithandela
Hattusha, isiXeko-dolophu sobukhosi bamaHeti: i-Photo Essay
Iingcaphuno eziPhambili zePro-Choice
Izizathu ezi-3 zokuba "I-Tale's Handmaid's Tale" ihlala iSebenzayo
Ngaba Ndifuna Ukutshutshiswa Nokumiswa Kwebhayisikili Yam Intaba?
'UkuLungiswa kweSikhisi': UkuFunda Kwabesifazane
Iiminyaniso zeBhayibhile NgeKrismesi
Konke malunga neGugu Granth, iZibhalo Ezingcwele zeSikism